FAQ - Shenzhen Comled Electronic Technology Co., Ltd.
Ohatrinona ny vidiny?
Ny vidiny dia mety hiova arakaraka ny famatsiana sy ny antony hafa amin'ny tsena.Handefa lisitry ny vidiny nohavaozina izahay rehefa mifandray aminay ny orinasanao raha mila fanazavana fanampiny.
Manana kaomandy kely indrindra ve ianao?
Eny, takianay ny baiko iraisam-pirenena rehetra mba hanana ny isan'ny kaomandy farany ambany indrindra.Raha mitady hivarotra indray ianao nefa amin'ny fatra kely kokoa dia manoro hevitra anao izahay hijery ny tranokalanay
Afaka manome ny antontan-taratasy mifandraika amin'izany ve ianao?
Eny, afaka manome ny ankamaroan'ny antontan-taratasy ao anatin'izany ny Certificates of Analysis / Conformance;fiantohana;Origin, ary antontan-taratasy fanondranana hafa raha ilaina.
Inona ny salan'ny fotoana hitarika?
Ho an'ny santionany, ny fotoana fitarihana dia eo amin'ny 7 andro.Ho an'ny famokarana faobe, ny fotoana nitarika dia 20-30 andro taorian'ny nandraisany ny fandoavam-bola.Lasa mandaitra ny fotoana fitarihana rehefa (1) nahazo ny petra-bola nataonao izahay, ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany momba ny vokatrao izahay.Raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny fe-potoanao ny fotoam-pitantananay dia diniho azafady ny zavatra takinao amin'ny fivarotanao.Amin'ny toe-javatra rehetra dia hiezaka hanome izay ilainao izahay.Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia afaka manao izany isika.
Karazana fomba fandoavam-bola inona no ekenao?
Azonao atao ny mandoa vola amin'ny kaontin'ny banky, Western Union na PayPal:
30% petra-bola mialoha, 70% fifandanjana manohitra ny dika mitovy ny B/L.
Inona ny fiantohana ny vokatra?
Izahay dia manome antoka ny fitaovana sy ny asa.Ny fanoloran-tenanay dia ny fahafaham-po anao amin'ny vokatray.Amin'ny garantie na tsia, kolontsainan'ny orinasanay ny miatrika sy mamaha ny olan'ny mpanjifa rehetra ho fahafaham-po ho an'ny rehetra.
Miantoka ny fandefasana vokatra azo antoka sy azo antoka ve ianao?
Eny, mampiasa fonosana fanondranana avo lenta foana izahay.Mampiasa fonosan-tandindomin-doza manokana ihany koa izahay ho an'ny entana mampidi-doza sy mpitatitra fitehirizana mangatsiaka voamarina ho an'ny entana mora saro-pady.Ny fonosana manokana sy ny fitakiana fonosana tsy manara-penitra dia mety hisy fiampangana fanampiny.
Ahoana ny momba ny saram-pandefasana?
Ny saran'ny fandefasana dia miankina amin'ny fomba fidinao hahazoana ny entana.Express no fomba haingana indrindra nefa lafo indrindra.Ny fitaterana an-dranomasina no vahaolana tsara indrindra ho an'ny vola be.Ny taham-pitaterana entana dia tsy azonay omena anao raha tsy fantatray ny antsipirian'ny vola, ny lanjany ary ny fomba.Mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.